माग्दै चलेको इप्रका ! – जागरण अनलाइन
माग्दै चलेको इप्रका !
२०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:५९ मा प्रकाशित
नारायणपुर । इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर २०३३ सालमा अस् थायी प्रहरी चौ कीका रुपमा स् थापित भएको हो  । जुन अस्थायी प्रहरी चौ की हुदै हाल इलाका प्रहरी कार्यालय बने को छ । सार्वजनिक कुवाको नाममा रहे को करीव साढे दुई कट्ठा जग्गा इप्रका नारायणपुर रहे को छ । २३ जनाको दरबन्दी रहे को इप्रका नारायणपुरमा हाल एकजना प्रहरी नायव निरीक्षक, पा“चजना हवलदार र ११ जना जवान रहे का छन । जुन ‘ख’ वर्गको इप्रका हो  ।
वर्गका हिसाबले इप्रका नारायणपुर ‘ख’ वर्गमा रहे पनि से वा, सुविधा र आन्तरिक व्यवस् थापनका हिसाबले चौ कीसरह नै छ । न सुरक्षित भवन छ, न आफ्नै जग्गा छ । गाडी मो टर चलाउन पनि स् थानीयहरुको भर छ । खाने पानी पनि स् थानीय खाने पानी समितिले निःशुल्क उपलब्ध गराउ“दै आइरहे को छ । इप्रकाको आन्तरिक व्यवस् थापन र खर्चका लागि राज्यले बजे ट उपलब्ध नगराउदा यस्तो समस्या भो ग्नु परिरहे को इप्रका नारायणपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक भीमबहादुर खड्काले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘भवनको रङरो गनदे खि गाडीको इन्धनसम्मका लागि स् थानीयको भर पर्नुपरे को छ । जसले गर्दा नागरिक सुरक्षा र से वा सम्पादनमा इप्रकाले निकै समस्या भो ग्नुपरे को छ ।’
आन्तरिक व्यवस् थापनका लागि बजे ट विनियो जन नहु“दा इप्रका स् थानीयहरुको सहयो गले चल्न बाध्य भएको उहा“को भनाइ छ । इप्रका नारायणपुरमा एक प्रहरी भ्यान र एउटा मो टरसाइकल छ । तर त्यसको मर्मत खर्चका लागि रकम नआउ“दा कहिले कसो थन्काइ राख्नुपर्ने बाध्यता भएको उहा“ले बताउनुभयो  ।
इप्रका नारायणपुरको घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८, ९, १०, ११ र १२ आधा भाग र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को आधा भागसम्म कार्यक्षे त्र तो किएको छ । भौ गो लिक रुपमा टाढा र कतिपय वडाहरु विकट पनि रहे का छन् । जहा कुनै समयमा के ही घटना भएमा प्रहरी हि“ड्दै जान पनि सम्भव दे खिदै न ।
जसका लागि गाडी र मो टरसाइकलको व्यवस् था गरिएको छ । तर इन्धन र मर्मत सम्भारका लागि रकम नआउ“दा प्रहरीले स् थानीयहरुको सहयो गमा इन्धनको जो हो र मर्मत गर्दै आइरहे को उहाको भनाइ छ । कहिले काहीं इन्धन अभावका कारण स् थानीयहरुको मो टरसाइकलमा प्रहरी घटनास् थलमा पुग्ने गरे को उहाले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘कहिले काहीं जादाजादै भ्यान र मो टरसाइकल बाटो मै रो किन्छन् इन्धन नभएका कारण ।’ जुन समस्या प्रहरीसगै नागरिकले भो ग्नु परिरहे को दे खिन्छ । इन्धन र गाडी मर्मत मात्रै हो इन ।
कार्यालयको सुरक्षा तारवार, गे ट, भान्साघर, शाौ चालयसम्म सवै स् थानीयको सहयो गले बने को उहाले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘नागरिकको सुरक्षाका लागि हामी बसे का छौ ं, नागरिकहरुले हामीलाई सहयो ग गर्दै आइरहनुभएको छ । तर यो काम राज्यको नै हो  ।’
तलब, खाना र विद्युत खर्चमा मात्रै राज्यले व्यवस्थापन गरे को उहा“को भनाइ छ । त्यो बाहे क अन्य सबै खर्च स् थानीयले धाने को उहा“ले बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘कहिले काहीं भिआइपीलाई स् कर्टिङ गर्नुपर्छ । तर गाडीमा ते ल हु“दै न । त्यो पनि माग्नुपर्छ । अपराधी भागे को हुन्छ । छो प्न जानुपर्छ, त्यस बे ला पनि ते ल ह“ुदै न । सवारी साधन दुर्घटनामा परे को हुन्छ । घाइते हरुलाई अस् पतालमा पु¥याउनुपर्छ । त्यो पनि स्थानीयसग माग्नुपर्छ । के गर्ने सबै कुरा मागे र टरे को छ ।’
इप्रका नारायणपुरको भवन बाहिरबाट दे ख्दा से तो अति सुन्दर दे खिए पनि भित्र सबै चर्किएको छ । इप्रकाको आफ्नो जग्गा नहुदा कार्यालयको नया“ भवन बन्न सके को छै न । जसका कारण कार्यालय जीर्ण भवनबाटै सञ्चालन भइरहे को छ । सार्वजनिक कुवाको जग्गामा भवन रहे काले नया भवन निर्माणका लागि कार्यालयको आफ्नै जग्गा चाहिने हुदा कार्यालयको नयँ“ भवन निर्माण हुन नसके को इप्रका नारायणपुरका प्रनानि खड्काले बताउनुभयो  ।
उहाले भन्नुभयो – ‘सडकमा मालवाहक गाडी गुड्दा भित्र घर थर्किन्छ, धुलो पनि खस् छ । बस् न उठ्न नै समस् या छ ।’ कार्यालय रहे को जग्गालाई कार्यालयका नाममा नामसारी गर्न धे रै प्रयास गरे पनि अझै कार्यालयको नाममा नामसारी नहु“दा यस् तो समस् या दे खिएको उहाको भनाइ छ ।
ब्यावसायिक उखु वारीमा रमाउदै डम्बर, २०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:५९
महेन्द्र : कलाकर्मीहरुका एक गडफादर २०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:५९
दाङमा हवाइ जहाजसहितको ‘ड्रिम पार्क’ २०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:५९